Rode elektronika fantsom-bozaka ho an'ny welding vy ambany. Izy io dia mety amin'ny famolavolana rafitra vy ambany karbaona, indrindra ho an'ny fantsom-by vy manify miaraka amina vy fohy ary mitaky fandefasana milamina tsara.
Izy io dia mety amin'ny famolavolana rafitra vy ambany karbaona, indrindra ho an'ny fantsom-by vy manify miaraka amina vy fohy ary mitaky fandefasana milamina tsara.
E6013 dia electrode karazana rutile. Afaka mihodina amin'ny alàlan'ny loharanom-pahefana AC & DC ary azo ampiharina amin'ny toerana rehetra. Izy io dia manana fahombiazana tsara toy ny arc azo antoka, spatter kely, fanesorana ny slag mora ary fahaiza-manao restick sns.
Matetika dia tsy mila maina indray ny electrode alohan'ny welding. Rehefa voan'ny hamandoana io dia tokony hovaina 150 ℃ -170 ℃ mandritra ny 0,5-1 ora.
Manome tanjaka Rel / Rp0.2 MPa
PROCEDURES OPERATING TYPICAL: (AC, DC)
Teo aloha: China New Product 8010 Welding Rod - Stainless Steel Welding Electrode AWS E316L-16 （A022） - Tianqiao
Manaraka: 2019 High quality China 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6024 6026 6000series Deep Groove Ball Bearing
vy vy, electrode welding, Kavina vy 1.5 Mm, Atsofohy vy vy vy, Ss Welding Electrode, Tsorakazo vy tsy mitovy,